भारतलाई हाम्रो जमिन नमिचभन्दा वर्षा राउतलाई समस्या– भारतीय साथीसँग कसरी फेस गर्ने ?
नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी मिचेर भारतले वर्षौदेखि आफ्नो रवैया देखाइरहेको छ । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले नयाँ नक्सामा यी भूमि पनि समावेश गरेर देशको सबै भूभाग हाम्रो हो भन्ने सन्देश दिइरहेको छ ।
यता नेपालले आफ्नो भूमि आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको छ भने भारतमा चाहिँ यही कारणले आक्रोश उत्पन्न भएको छ । भारतीय मिडियाहरु नेपाल सरकार, नेपालीमाथि खनिएका छन् ।
यो सबलाई बेवास्ता गर्दै अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले देशप्रतिको माया देखाएकी छिन् । भारतीय टिभी च्यानलहरुले चर्को विरोध गर्दा पनि उनी आफ्नो देशको माया अडिग छिन्, नेपालको जग्गा भारतले अतिक्रमण गरेको हो भन्ने निक्र्योलमा अडिग छिन् ।
तर, नेपालकै अभिनेत्री वर्षा राउतलाई भने यो कुरा मन परेको छैन ।
शनिबार एकाएक उनले दिएको यस्तै अभिव्यक्तिको एउटा भिडियो सामाजिक सन्जालमा भाइरल भइरहेको छ । भिडियोमा उनले प्रष्टरुपमा भनेकी छिन्&ndash; यता र उताका पत्रकार झगडा गर्दा मलाई मेरा इन्डियन साथीसँग फेस गर्न समस्या भयो ।
सन्दर्भ हो, सिनेपाटी नामको एक युट्युब च्यानलमा आएको वर्षा र प्रियंकाको एक भिडियो अन्तर्वार्ताको । वर्षा बस्नेतले लिएको यो अन्तर्वार्तामा उनले प्रियंका र वर्षालाई पछिल्लो सीमा विवादबारे पनि सोध्छिन् ।
प्रियंकाले यसबारे आफूले रिसर्च नगरिसकेको भन्दै यसबारे रिसर्च गर्न पर्ने जवाफ दिन्छिन् । त्यसपछि पालो आउँछ वर्षा राउतको ।
वर्षाले पनि प्रियंकाका कुरामा सहमत छिन् ।
वर्षाले भनेकी छिन्, ‘ देशको माया लाग्छ भन्दैमा यो हाम्रै हो, तिमीहरुले के गरेको भनेर झगडा गर्ने कुरा होइन नि । यो त टेबल टक गरेर उताको गर्भमेन्ट र यताको गर्भमेन्टले मिलेर गर्ने कुरा हो नि त । यहाँ त झगडा पारिरहेका छन्, उताको र यताको जर्नालिस्टसँग मिलेर ।’
उनी यतिमै रोकिन्नन् । उनले थपेकी छिन्, ‘अहिले त यता र उताका जर्नालिस्ट मिलेर झगडा झगडा पार्ने कुरा भइरहेको छ के ।’
त्यसपछि उनले थप्छिन्&ndash; मेरो इन्डियन फ्रेन्ड्ससँग कसरी फेस गर्ने भइरहेको छ के अहिलेको सिजुएसन चाहिँ ?
ल, एकछिनलाई मानौँ, यसले वर्षालाई भएका केही भारतीय साथीहरुसँग कुराकानी गर्नलाई नै समस्या पार्यो रे । तर, के मनिषा कोइरालाका लाखौँ भारतीय समर्थक छैनन् ? भारतीय साथीहरु मनिषा कोइरालाका छैनन् ? के मनिषालाई यो विषयमा आफ्नो मनमा भएको देशको माया पोख्दा भारतीय साथीहरुसँग समस्या पर्छ भन्ने सोच आएन होला ?
पक्कै पनि आयो होला । तर, उनले आफूले जे गर्नु पर्ने हो, त्यो गरिन्, अर्थात् देशप्रति मनमा रहेको आफ्नो माया पोखिन् ।
अनि वर्षा राउतले ?
अहिले सामाजिक सन्जालमा निकै चर्चा पाइरहेको उनको यो भिडियो हेर्नुहोस्ः
सबैलाई राष्ट्र, राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डता को माया छ । कलाकार भनेको देशको गहना हो भन्छ तर यिनी त साथिको चिन्ता हैट , गहना होइन गहनायो तिम्रो भन्दा धेरै इन्डियन साथि त मनिशा कोइराला को होला मनिशा लाई हेर अनि आफ्नो कुरा राख्नु https://t.co/6WIbAuwVK7
— Taraman rawal (@rawal_taraman) May 23, 2020
प्रकाशित मिति : जेठ १०, २०७७ शनिबार २३:४२:१६,
संसद् विघटन : आखिर के हो प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेको अवशिष्ट अधिकार?